Atụmatụ i kwesịrị ịma banyere Apple Music vs. Spotify Music vs. Google Play Music
Atụmatụ I Kwesịrị Ịmara Banyere Apple Music vs. Spotify Music vs. Google Play Music
Music gụgharia ọrụ mere ka music dị ọnụ ala karịa na oké ọnụ ka music ndị hụrụ. Na ọrụ a, music hụrụ ugbu a nwere ohere ọtụtụ nde music maka a kwa ọnwa na ndenye aha nke na-emekarị na-efu $9.99. Na nke a na ndenye aha, ọrụ pụrụ ige ntị na music ọ bụla na-ese ma ọ bụ album enweghị akwụ ụgwọ ọ bụla nke tracks ma ọ bụ album onwe ya.
Ọtụtụ n'ime ndị music nkwanye Ọrụ na-enye free ndenye aha ma na-enwechaghị nhọrọ mgbe adịchaghị ọrụ nwere ohere ihe niile ha chọrọ. Adịchaghị ọrụ nwere ike ịzọpụta music maka offline n'ige ntị, ike ha playlist na ọtụtụ ndị ọzọ.
E nwere ọtụtụ music gụgharia ọrụ dị ma nanị ole na ole n'ime ha bụ ndị na-ewu ewu. Na-ewu ewu ọrụ na-agụnye Apple Music, Spotify na Google Play Music.
Apple Music bụ ọhụrụ music gụgharia ọrụ ẹkenam site nnọọ ewu ewu Apple Company. Dị ka Apple, Apple Music bụ 'All ụzọ ị hụrụ n'anya music, nile na otu ebe'.
Apple Music-enye gị ohere nwere ohere ọtụtụ nde music ziri ezi gị Apple ngwaọrụ maka obere kwa ọnwa ego. Ọ na-enye gị ohere iji ikpokọta gị online na offline playlist ziri ezi gị Apple ngwaọrụ. Ị nwere ike na-ege ntị music si ọkacha mmasị gị artists ma ọ bụ album. Ị nwekwara ohere onye na-ese si elekọta mmadụ na netwọk profaịlụ na-enweghị na-ahapụ ndị Apple Music ngwa.
Ntọhapụ nke ndị Apple Music ewetawokwara banyere a redesigned music ngwa n'ihi na Apple ngwaọrụ na a omenala playlist. The Apple Music nwekwara a 24/7 redio dị maka onye ọ bụla na-ege ntị. Ọhụrụ Apple Music ngwa nwere gbagwojuru Music ike na ya.
Nke a bụ ọrụ nanị dị ka ọrụ na Apple ngwaọrụ. Ọrụ na-enweghị Apple ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad, iPod na Mac ike ịnweta Apple Music ngwa. Ọ bụkwa free nke mbụ ọnwa 3 ka ọrụ na mgbe ahụ a kwa ọnwa ego nke $9.99 maka ndị mmadụ n'otu n'otu na $14.99 ruo 6 ngwaọrụ makwaara dị ka Family atụmatụ.
Spotify bụkwa otu n'ime ndị na-ewu ewu music gụgharia ọrụ na ọtụtụ nde ndị music dị maka ọrụ na-ege ntị n'agbanyeghị ebe ha bụ ma ọ bụ ngwaọrụ ha na-eji na oge. Ọ kwuru na-abụ otu nke kasị mma music gụgharia ọrụ dị na ya ọtụtụ atụmatụ dị ka ndị ọzọ music gụgharia ọrụ.
Spotify akwado nta ọ bụla n'elu ikpo okwu. E nwere Spotify ngwa n'ihi na niile fọrọ nke nta niile sistem na mobile ngwaọrụ. Ma ọ Android, iOS, Mac, Windows ma ọ bụ Linux, Spotify nwere ihe ngwa maka ya. Ọ na-nwere a web ọkpụkpọ n'ihi na ọrụ ndị na-adịghị njikere ibudata ngwa. Ọ na-ewetara music gị ọ bụla oge ma ị bụ na kọmputa gị, mkpanaka gị na ngwaọrụ ma ọ bụ gị mbadamba, ị nwere ike ịnweta gị music bụla ị chọrọ.
Dị ka ihe niile music gụgharia ọrụ, Spotify nwekwara adịchaghị ndenye aha dị. Maka ọhụrụ ọrụ, ha na-ekwe ọnwa 3 adịchaghị ndenye aha maka naanị $0.99 na mgbe ahụ $9.99 e mesịa.
The Spotify ọrụ nwere a mmadụ mgbasa ozi n'elu ikpo okwu ebe ọrụ nwere ike ịkọrọ ha listi ọkpụkpọ na ihe ha na-ege ntị na Spotify na enyi. Ọ na-enye ohere adịchaghị ọrụ ha ntị music offline ọbụna ma ọ bụrụ na ha anaghị online. Ọrụ nwekwara ike ịnweta ha zọpụta listi ọkpụkpọ n'agbanyeghị nke ngwaọrụ ha na-eji ogologo oge ka ha banye na akaụntụ ha.
Site aha, ị nwere ike ịgwa na Google Play music na-ekesịpde site Google. Enwe na-akparaghị ókè music na Google Play Music na ngwaọrụ gị. Google Play Music bụkwa akụkụ nke mpi na music gụgharia ọrụ ụwa. Ọ nwere yiri atụmatụ na ndị ọzọ gụgharia ọrụ. Ọ na-enye ọrụ akparaghị ókè ohere na-akparaghị ókè songs nri na ngwaọrụ gị.
Onye ọ bula nke music gụgharia ọrụ taa nwere a adịchaghị ndenye aha na otú Google. Maka naanị $9.99, ị ga-enwe ohere na-akparaghị ókè music na ngwaọrụ gị. Ọ na-enye ohere ụbọchị 30 free ikpe nke adịchaghị atụmatụ ọhụrụ ọrụ
The free version bụghị na njọ n'ihi na ọ na-egosiputa dịghị mgbasa ozi ka ọrụ nke pụtara ọbụna free ọrụ nwere ike na-enwe mgbasa ozi free music n'adịghị ka ụfọdụ music gụgharia ọrụ na-egosipụta manụ mgbasa ozi ha free ọrụ. Ọ bụ ezie na free ọrụ nwere ịgba na songs ha ntị ma na ha nwere ike ghara ige Radio na-akparaghị ókè skips pụtara na e nwere ole na ole nke skips na redio.
The table n'okpuru na-egosi tụnyere n'etiti n'elu music gụgharia ọrụ nke bụ Apple Music, Spotify na Google Play Music.
The tụnyere n'elu bụ maka atọ isi music gụgharia ọrụ dị. Apple music bụ ọhụrụ music gụgharia ọrụ na ya mere na ọ bụghị ọtụtụ nwere ike kwuru banyere ya. The atụmatụ depụtara bụ atụmatụ nke ọ bụla n'ime ha na oge nke ekewetde a post.
Si na tebụl, ọ ga-kwuru na ihe nile music gụgharia ọrụ ana otu ego nke bụ $9.99 na ọ bụ nanị Google na-adịghị ekwe ka Family òkè. Ọzọkwa, ha nile nwere ihe karịrị nde 30 tracks ha n'ọbá akwụkwọ na-ahapụ ọrụ na-atụgharị uche n'ihu na nke ọrụ iji.
iOS, Android, PC, Mac, Apple TV, web iOS, Android, Windows Phone, blackberry, PC, Mac, PS3, PS4, dị iche iche set-top igbe, web iOS, Android, web
Ee, na-enwechaghị atụmatụ Ee, na mgbasa ozi YesYes, na-enwechaghị atụmatụ
Ọnwa atọ Ọ dịghị ma mbụ ọnwa 3 maka naanị $0.99 Ụbọchị 30
Ee, $14.99 kwa ọnwa, ruo 6 ọrụ Ee, $ 5 kwa ọnwa kwa onye ọrụ N / A
-Anọghị n'ịntanetị na-ege ntị
Ee, na-akwụ ụgwọ na ndenye aha Ee, na-akwụ ụgwọ na ndenye aha Ee, na-akwụ ụgwọ na ndenye aha
256 kbps Ruo 320 kbps Ruo 320 kbps
Music n'ọbá akwụkwọ size
30 nde N'ime nde 30
Artist elekọta mmadụ na netwọk
Ee Ọ dịghị Ọ dịghị
Olee otú Naghachi ehichapụ Videos si Samsung Galaxy
Ihe Ị Mkpa Ịmata banyere Samsung Njikọ Manager
Ihe Ọmụma Banyere Samsung Sidesync
Top 6 Samsung Ndi ana-akpo ndabere Ngwá Ọrụ Buru Ndi ana-akpo Secure
Olee otú Ka Android Ụdị Ndi ana-akpo site aha ikpeazụ
> Resource> Android> Atụmatụ I Kwesịrị Ịmara Banyere Apple Music vs. Spotify Music vs. Google Play Music